Hawlgalkii Huteelka Naasa Hablood 2 Oo La Soo Afjarey | Saxil News Network
Hawlgalkii Huteelka Naasa Hablood 2 Oo La Soo Afjarey
October 29, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Muqdisho (Saxilnews) Ciidamada amaanka ayaa soo afjarey hawlgalkii ay ka wadeen Hotel Naasa Hablood 2 oo koox ka tirsan al-Shabaab ay weerar ku qaadeen maalintii shalay ee Sabtida.
Hawlgalka ayaa socdey in ka badan 10 saacadood, waxaa ku nafwaayey dad badan oo aan weli si rasmi ah tiradooda loo sheegin, waxaa la soo badbaadiyey Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin hore, ganacsato iyo dad kale oo badan oo rayid ah.
Dadka al-Shabaab ku dileen Naasa Hablood waxaa kamid ah, Wasiirkii Arrimaha Gudaha ee Koonfur Galbeed Madoobe Nuunow, horey u ahaan jirey Xildhibaan, Xildhibaan hore Cabdinaasir Gaarane iyo saraakiil kale oo horey uga soo shaqeysey ciidanka Booliska. Sidoo kale waxaa kamid ahaa dadka qaraxaas lagu diley Sakariye Maxamuud Xaaji Ciise oo muddooyinkii danbe ka shaqeynaayey xafiiska arrimaha carabta ee Soomaaliya, Sakariye ayaa wax badan ka soo shaqeeyey Waxbarashada deegaanada Puntland. Wararka soo baxaya ayaa sheegay in Hooyo iyo laba caruur ah oo ay dhashey weerarka lagu dilay.
Dadka la soo badbaadiyey Waxaa kamid ah Wasiirka tamarta iyo biyaha Saalim Caliyow Ibrow iyo Sheekh Cali Wajiis.
Waxaa la qiyaasayaa in al-Shabaab weerarka ku dileen dad ka badan 20 qof, halka dhaawucu intaas ka badan yahay.
Waxaa tacsi ka direy dhibaatada dhacdey madaxda Dowaldda federaalka sida Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha. Waxaa ku sugan Muqdisho Madaxda Dowald Goboleedyada oo u yimid Muqdisho shir wada tashi kaas oo dhici lahaa maalintii shalay, waxaana loo ballamey maanta, inkasta oo ay adag tahay in shirkaasi maanta furmo.
Weerarkan ayaa imaanaya 14 maalmood kadib weerarkii lagu xasuuqay dad ka badan 350 qof ee ka dhacay Isgoyskii Zoope.
Waxaa lagu wadaa in maanta Dowladda Federaalku ay ka hadasho weerarkan iyo khasaaraha ka dhashey. Warar ayaa sheegaya in kuwii weerarka soo qaadey qaarkood nolol lagu hayo, ma jirto wax caddeyn kara wararkaas.
Weerarkan Hotel Naasa Hablood 2 waxaa sheegtey al-Shabaab, waxayna sheegeen in ay ka qaybqaateen koox loo carbiyey weerarada aan dib loo noqon.
Sanadkii 2016 ayaa koox ka tirsan al-Shabaab sidaan oo kale weerar ku qaadeen Hotel Naasa Hablood 2, waxaana kamid ahaa dadkii ay ku dileen Wasiir ka tirsan Dowladdii xiligaas Burci Maxamed Xamsa.